Iza moa izahay - Ningbo Neko Housewares Co., Ltd.
naorina tamin'ny volana Aprily 1995, dia fanondranana-mirona orinasa hirotsaka amin'ny orinasa mpamokatra entana, ny matihanina famokarana sy ny varotra ny vokatra sy ny tokantrano manadio zavatra.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa manarona fanorenana faritra 25,000M2 maherin'ny 500 mpiasa.
Ny orinasa dia ahitana ny bobongolo atrikasa (CNC, sokitra milina, mihaohao milina sy ny fitaovana hafa); tsindrona mamolavola atrikasa (77 tsindrona mamolavola milina ny 160g ~ 5000g, ary 63 milina, fitaovana atrikasa (mihoatra ny 16 karazana totohondriny milina ny 10 ka hatramin'ny 100 taonina, ary maro ny hydraulic fanapahana milina, blanking milina, toerana welders sy ny mpanampy fitaovana ); fanjairana atrikasa (mihoatra ny 100 isan-karazany milina fanjairana, 12 knitting milina sy ny maro hafa mpanampy fitaovana), fivoriana atrikasa (16 tsipika fivoriambe mandeha ho azy sy ny maro matetika avo-milina, herinaratra fitepon'ny fony sy ny mpanampy fitaovana).
Tamin'ny 2013, ny orinasa varotra nihatra any RMB 140 tapitrisa, izay tahan'ny fanondranana dia 75% ny fitambaran'ny sarobidy.
Ny orinasa dia manana vokatra mahery fampandrosoana ny fahaizany, miaraka amin'ny vondrona matihanina injeniera ara-teknika izay mitarika 3D fomba famolavolana mba hanangana ny vokatra amin'ny tsara bika sy ny haingana sy mora ampiasaina, izay nidera ny mpampiasa.
Ao amin'ny fampandrosoana ny vokatra vaovao, miantehitra amin'ny "Neko, Teknolojia R & D Center", ilay orinasa 135 no nahazo Patents fahefana avy amin'ny fanjakana, ary dia fantatra ho toy ny "Zhejiang patanty Enterprise Model", satria mitarika ao amin 'ny orinasa. Ny orinasa dia mitondra ny lohateny hoe "AAA-anivon'ny fifanarahana-manome voninahitra & Fampanantenana-mitandrina Unit", "Ningbo Famous Brand Products" ny taona 2007, ary "Ningbo amantarana malaza".
Amin'izao fotoana izao, dia manana fifandraisana amin'ny orinasa sy firenena maro voasoratra anarana Neko marika mihoatra ny 100 firenena.
Industrial andriamby Window madio, Window madio Fitaovana, mandroso fanasana Window madio , Telescopic Window madio, Professional Series , tenan'ny Window madio ,